Prof. Jawaari ?dooda mooshinka xukuumada, waxaan rajo ka qabnaa in beri la soo afmeero? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Prof. Jawaari ?dooda mooshinka xukuumada, waxaan rajo ka qabnaa in beri la soo afmeero? (Dhegeyso)
Diseembar 1, 2013 9:42 b 0
Muqdisho, December 1, 2013 – Baarlamanka Jamhuuriyada Soomaaliya ayaa rajo wayn ka qaba in gebi ahaanba beri ?la soo afjaro dooda ka dhanka ah xukuumada RW Saacid, sida uu sheegay Prof. Jawaari oo ah gudoomiyaha baarlamanka dalka oo soo xiray fadhigii maanta.
33 iyo saddex mudane oo ka tirsan baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta ka hadlay dooda mooshinka laga keenay RW Saacid, sida uu sheegay gudoomiye Jawaari, xildhibaanada ayaa siyaabo kala duwan u soo jeediyey mooshinka, Prof. Jawaari waxaa uu baarlamanka u sheegay in beri la isu soo noqdo.
?Beri in aan soo afmeerno ayaa rajaynaynaa, waa in golaha la yimaadaa xili hore, si fadhiga loo furo 10:00 barqanimo.? Ayuu yiri Prof. Jawaari oo soo xirayey fadhiga gollaha shacabka oo uu maanta ka bilowday mooshinka ka dhanka ah xukuumada.
Xildhibaanada difaacaya RW Saacid ayaa ku doodaya in aan sharciga loo marin mooshinka laga keenay xukuumada, waxay dalbadeen in dastuurka dib loogu noqdo lana eego sharciga si loo maro jidka saxda ah ee mooshinka.
?waxaan rabnaa mooshin marka laga hadlayo waa in uu sharci cuskan yahay, qodobka 112 aad ee dastuurka ma khuseeyo xukuumada ee waa barlaman shaqadiisii gabay, dib u eega dastuurka.? Ayuu Cabdi xaashi cabdulaahi oo baarlamanka ka codsaday inay mooshinka dastuurka ku saleeyaan.
Docda kale, Xildhibaanada mooshinka keenay ayaa ku doodaya in xukuumadu ay lumisay wax badan oo loo igmaday, isla markaasna waxay iftiimiyeen ceebo dhowr ah oo ay dowladda RW Saacid leedahay.
Ra?isal wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta loo diiday in uu golaha tago oo is difaaco, war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska RW Saacid galabta ayaa lagu sheegay in xukuumadu ay ku adkaysanayso inay is difaacdo, taasoo waafaqsan cadaaladda dabiiciga ah (Natural Justice).
Dhegeyso:- dooda baarlamanka iyo war-bixin uu diyaariyey Cabdullaahi Suldaan oo daljir ka tirsan
Baahin: Axad, 1- Dec, 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdifataax Cumar Geeddi ~ Daljir ~ Galkacyo